आज कुन-कुन जिल्लामा कति थपिए कोरोना संक्रमित ? (सूचीसहित) | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more आज कुन-कुन जिल्लामा कति थपिए कोरोना संक्रमित ? (सूचीसहित)
भदौ २ गते, २०७७ - १७:५५
काठमाडौं । गत २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार १६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा १३ हजार ४८१ पीसीआर परीक्षण गदाए १ हजार १६ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा थपिएका सङ्क्रमितसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या २८ हजार २५७ पुगेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरू १० हजार ५६३ रहेका छन् ।
मंगलबार पनि काठमाडौंमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर उच्च देखिएको छ । आज ४७ जिल्लामा कोरानो संक्रमित थपिएकामा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १३८ जना छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा २०५ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् ।
झापामा २८ जना, खोटाङमा १, मोरङमा १०८ जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै ओखलढुंगामा एक, पाँचथरमा एक, संखुवासभामा ३ र सुनसरीमा ७ जना संक्रमित थपिएका छन्।
यस्तै उदयपुरमा दुई सप्तरीमा ३, सिरहामा १६ र धनुषामा ६४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। पछिल्लो २४ घण्टामा महोत्तरीमा २४ जना र सर्लाहीमा १०७ जनामा संक्रमण भएको छ। यस्तै बारामा ४२, पर्सामा १२८ र रौतहटमा ३७ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ ।
सिन्धुलीमा एक, दोलखामा २, भक्तपुरमा १७ र धादिङमा २ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ । आज सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १३८ जनामा संक्रमण भएको छ भने भक्तपुरमा १७ र भक्तपुरमा १७ जना थपिएका छन् । यस्तै काभ्रेमा २१, सिन्धुपाल्चोकमा ३ र चितवनमा ४९ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ ।
मकवानपुरमा ३०, बागलुङमा तीन, गोरखामा २, कास्कीमा १६ र लमजुङमा १ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्।
यस्तै पूर्वी नवलपरासीमा ४, स्याङ्जामा १, तनहुँमा २ र कपिलवस्तुमा १९ जनामा कोरोना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम नवलपरासीमा पछिल्ला चौबीस घण्टामा एकजनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। यस्तै रूपन्देहीमा १४, दाङमा एक, रोल्पामा १, बाँकेमा ६, बर्दियामा १९ र पश्चिम रुकुमा एक जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
मन्त्रालयको विवरणअनुसार सुर्खेतमा १, दैलेखमा ५, कैलालीमा १ र डोटीमा ४६ जना संक्रमित थपिएका छन् । कञ्चनपुर र दार्चुलामा १–१ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ ।
भदौ २ गते, २०७७ - १७:५५ मा प्रकाशित